H&M नेकलेसहरू जुन तपाईंले यस गर्मीमा मिस गर्न सक्नुहुन्न | बेजिया
H&M नेकलेसहरूको संयोजन जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न
सुसाना Godoy | 17/06/2022 11:00 | सहायक उपकरणहरू
हामी वर्षको त्यो समयमा आइपुग्यौं जहाँ कपडाको घाँटी बढी हुन्छ र जहाँ छाला बढी नायक हुन्छ। तसर्थ, को रूप मा पूरक H&M सँग भएको जस्तै हार। किनभने यो सिजन तिनीहरूले धेरै लिन्छन्, त्यसैले तपाईंले हामीले तपाईंको लागि तयार गरेका सबै कुराहरूको प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
विचार र फिनिशहरूको संग्रह जसले तपाईंको उत्कृष्ट लुकलाई जीवन दिनेछ। गर्ने बेला भयो सबैभन्दा मौलिक विचारहरूमा शर्त र हाम्रो उत्कृष्ट स्वाद ल्याउनुहोस्। यसरी, हामीले लगाउने प्रत्येक लुकले हामीलाई धेरै मनपर्ने व्यक्तिगत स्पर्श दिन्छ। तपाईले आफ्नो मनपर्ने डिजाइन रोज्नु पर्छ।
1 H&M मा तीन-स्ट्र्यान्ड नेकलेस
2 सानो फूलहरु संग सुनको हार
3 ट्रिपल कुञ्जी र ताला लटकन
4 'बेस्ट फ्रेन्ड्स' लटकन
5 मोतीको हार
H&M मा तीन-स्ट्र्यान्ड नेकलेस
सिजनको ठूलो प्रवृत्ति मध्ये एक यो हो। यो तीन-स्ट्र्यान्ड नेकलेस हो।। किनकि हामीले लगाउने प्रत्येक लुकलाई थप मौलिकता दिनको लागि पेन्डन्टहरू संयोजन गर्नु सधैं उत्तम विकल्प हो। तर यस अवस्थामा, यो संयोजन आवश्यक छैन किनभने हार साँच्चै तीनवटा मोडहरू सँगै छन्। त्यसैले, प्रत्येक एक विशेष समाप्त छ। सबैभन्दा लामो एउटा सानो पदकको साथ धेरै राम्रो चेनले बनेको हुन्छ। दोस्रोमा हामी साना बलहरूको श्रृंखला फेला पार्छौं जसले यसलाई ठूला लिङ्कहरूको श्रृंखलासँग अन्त्य गर्न सजाउँछ। निस्सन्देह, हाम्रो शैलीलाई मौलिकता दिनको लागि उत्तम विकल्प भन्दा बढी।
सानो फूलहरु संग सुनको हार
यस्तो देखिन्छ कि सुनौलो स्पर्श सिजनको उत्कृष्ट नायक मध्ये एक हो। यद्यपि यदि तपाइँ चाँदी मनपर्छ भने, तपाइँसँग त्यो फिनिशको साथ तपाइँको हार पनि हुनेछ। यस क्षणको लागि हामी पहिलोसँग रहन्छौं तर चोकर को रूप मा। अर्को आधारभूत विकल्पहरू जब हामी सामानहरूको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यसोभए, त्यो सुनौलो चमकले घाँटी सजाउनु र फूलहरूको रूपमा स-साना मोतीहरूको उत्तराधिकारले पूरा गर्नु जस्तो केहि छैन। सबैभन्दा सुरुचिपूर्ण शैली एक हुनेछ जुन तपाइँसँग यस जस्तो विचारको लागि धन्यवाद। तपाईको ब्लाउजका लागि उपयुक्त तर सबैभन्दा ग्रीष्मकालीन पोशाकहरूको लागि पनि।
ट्रिपल कुञ्जी र ताला लटकन
हामी सुनको रंगको साथ जारी राख्छौं र हामीले मनपर्ने ती फिनिशहरू मध्ये एकको साथ। यो तीनवटा प्रभाव हो जुन फेरि उपस्थित छ। यद्यपि यस अवस्थामा, हामीले पत्ता लगायौं कि चेनहरू आफैंमा धेरै राम्रो लिङ्कहरूबाट अन्य कोइल्ड प्रकारका लिंकहरू छन्, जुन एकदम मौलिक छन्। तर मौलिकताको लागि, हामीसँग चाबी र ताला दुवै छ। दुईवटा उत्तम विवरणहरू जुन हामीले पहिले नै एकअर्कालाई राम्रोसँग पूरै थाहा पाएका छौं र अब तिनीहरूले हाम्रो घाँटीमा अझ बढी गर्नेछन्।
'बेस्ट फ्रेन्ड्स' लटकन
यदि तपाइँ एक राम्रो ग्रीष्मकालीन उपहार बनाउन चाहानुहुन्छ जुन जीवनभर रहन्छ, त्यसपछि तपाइँसँग अर्को हार छ जुन तपाइँलाई पनि मनपर्नेछ, र धेरै। किनभने असल साथीहरू हाम्रो जीवनमा सधैं महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए, यदि हामी यसलाई सधैं हाम्रो घाँटीमा श्रद्धांजलिको रूपमा लगाउन सक्छौं भने, अझ राम्रो। यो एउटा लटकन हो जसमा सुन्दर मुटु छ जहाँ शब्दहरू 'बेस्ट फ्रेन्ड्स' मुख्य पात्र हुन्। समान को। यसरी, तपाइँ एक र त्यो सबैभन्दा राम्रो साथी वा साथी, अर्को पार्टी लिन सक्नुहुन्छ। यो ध्यान दिनुहोस् कि तपाइँ समान भावनाहरू साझा गर्नुहुन्छ!
यस्तो देखिन्छ कि हामी फेरि तीनवटा नेकलेसको बारेमा कुरा गर्दैछौं, ती मध्ये दुई समान तर तेस्रो नयाँ आइडिया हुनेछ जुन तपाईलाई धेरै मन पर्नेछ। किनभने दुई समानहरू टुटेको हृदयबाट बनेका र जिरकोनले भरिएका छन् भन्ने तथ्यको अतिरिक्त, दृश्य तेस्रोमा जान्छ जुन असहमति हो। सानो मोती को एक श्रृंखला बनेको। निस्सन्देह, मानिसहरू एक उत्तम विकल्प हुन् र हामी देख्छौं, यो कहिल्यै शैलीबाट बाहिर जाँदैन। त्यसैले हामीले तिनीहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। शैली र मौलिकता तपाईंको घाँटीबाट चमक हुनेछ। यी मध्ये कुन हार तपाईलाई धेरै मन पर्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » सहायक उपकरणहरू » H&M नेकलेसहरूको संयोजन जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न
रोमान्टिक सम्बन्धमा व्यक्तिगत ठाउँ